Wadooyinka magaalada Muqdisho oo mudo labo maalmood ah la xiri doono. – Radio Daljir
Wadooyinka magaalada Muqdisho oo mudo labo maalmood ah la xiri doono.
Febraayo 20, 2017 9:10 g 0
Muqdisho, Feb 21 2017-Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka hadlay caleemo saarka Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo Arbacada ka dhici doonta Magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in si aad ah loogu diyaar garoobay caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Ismaaciil Cabdi Macalin (Guure), gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay berri oo Talaado ah iyo Arbacada in wadooyinka Muqdisho loo xiraayo Caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo, shacabka Soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay dulqaataan.
Maalinta Arbacada ah oo Taariikhda ay ku beegan tahay 22-ka Bishan ayaa Magaalada Muqdisho waxaa ka dhici doonta Munaasabad lagu caleemo saarayo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taasi oo ay ka soo qeyb gali doonaan Madax ka socota Afrika.